Chiang Mai, ịrị ugwu nke Thailand | Akụkọ Njem
Chiang Mai, ugwu nke ugwu Thailand
Maria | | omenala, Tailandia
Chiang Mai, isi obodo ugwu nke Thailand, si na Barngkok gbagharia. A maara ya dịka La Rosa del Norte maka oke ịma mma nke ala ndị gbara ya gburugburu yana maka ọdịbendị ọdịnala ya bara ụba.
Lee ebe a karịa ụlọ arụsị Buddhist 300, Doi Inthanon National Park, ugwu dị nsọ nke Doi Suthep na ugwu elephant a ma ama Elephant Nature Park.
Y’oburu n’itughari uche n’igoro njem na Thailand n’ime ohuru 2017 ohuru a, anyi n’enye Chiang Mai dika ebe ichoro.
1 Ebe Chiang Mai
2 Nyochaa obodo Chiang Mai
3 Mara ahịa ndị dị na mpaghara
4 Mụta asụsụ Thai na Chiang Mai
5 Itingga na Doi Inthanon National Park
6 Elephant nature park
7 Ugwu Doi Suthep si Chiang Mai
Ebe Chiang Mai
Ọ dị na mgbago ugwu Thailand, ihe dị ka kilomita 80 site na obodo Chiang Mai, nke n'aka nke ya dịkwa narị kilomita asaa site na Bangkok.
E hiwere ya na 1296 site n'aka King Mengrau onye nyere iwu ka e wuo olulu na mgbidi gburugburu obodo ahụ iji chebe onwe ya pụọ ​​na mbata nke ndị Burmese. Mgbidi a ka dị taa ma kọwaa obodo ochie nke Chiang Mai ebe ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ị ga-eme.
Nyochaa obodo Chiang Mai
Dị ka m kwuru na mbụ, etiti akụkọ ihe mere eme nke Chiang Mai gbara mgbidi na olulu gbara gburugburu iji chebe onwe ya n'aka ndị Burmese. Ebe etiti a bụ ebe jupụtara na ndụ na mmegharị, zuru oke iji nọrọ ụbọchị ma mata Chiang Mai n'ụkwụ ma ọ bụ site na igwe kwụ otu ebe.
N'oge njem ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ nsọ Buddha n'ihi na ebe a nwere ihe karịrị narị atọ. Agbanyeghị, ọmarịcha mara mma na ama ama bụ Wat Phra Singh wuru na 1345.
Ọtụtụ ụzọ njem nleta na-eme ka agụụ gụọ gị, yabụ anyị na-atụ aro ka ị gaa n'otu n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantsụ streetụ n'okporo ámá dị na Chiang Mai nụrụ ụtọ pad thai, gbalịa anụ a ghere eghe ma drinkụọ iko mmanya na-enye ume ọhụrụ.
Mara ahịa ndị dị na mpaghara
Chiang Mai nwere ọtụtụ ahịa ị ga-efu, n'ihi ya, ndị na-azụ ahịa ga-anọ n'ike ha. Ọ bụrụ n ’oge ịchọta ihe ncheta iji were njem gị gaa Thailand, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị nweta ọrụ aka.
Otu n'ime ndị njem nleta kachasị mma bụ Sunday Walking Street (Thanon Ratchadomnoen Street) nke na-emepe Sọnde site na 16pm. ruo etiti abalị. Ahịa ọzọ na-adọrọ mmasị ileta bụ Ahịa Warorot, nke dị na akuku Thanon Chiang Mai Street na Thanon Witchayanon.
Mụta asụsụ Thai na Chiang Mai
Iji meziwanye ahụmịhe ndị biri n'oge njem gị na Thailand, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gaa usoro metụtara ọdịbendị Thai ma ọ bụrụ na ị nwere oge. Na Chiang Mai enwere ụlọ akwụkwọ dị iche iche: isi nri, asụsụ, ịhịa aka n'ahụ ... Na mgbakwunye, a mara obodo na gburugburu ya maka njem ime mmụọ ka ị wee nwee ike ịmụ Buddha.
Itingga na Doi Inthanon National Park
Ihe dị ka kilomita 65 site na Chiang Mai dị na Doi Inthanon National Park dị ebube nke nwere ugwu kachasị elu na Thailand na mita 2565 nke bụ akụkụ nke Himalayas. Ọnụ ụzọ ahụ na-efu ihe ruru 300 baht maka ndị ala ọzọ na 50 maka ndị obodo.
Akpọrọ ogige Ọdụ Thai a ka Inthanon, onye isi ọchịchị nke asaa nke Chiang Mai, onye nwụrụ anwụ na-ezu ike n'akụkụ nzuko ahụ.
N'etiti ugwu ya na-acha akwụkwọ ndụ, Doi Inthanon National Park na-ezo nsụda mmiri ndị mara mma dịka nke Wachirathan ma ọ bụ Sirithan, ụzọ ndị ahịhịa gbara gburugburu na ụdị osikapa na-ahụkarị yana ọmarịcha Eze na Queen pagodas nke wuru na 1987 na 1992 iji mee emume ndị eze. 60th ncheta. Dabere na Doi Inthanon, a na-eleta ha ma na-ese foto dị ka ogige ndị mara mma, ọdọ mmiri na ọdọ mmiri gbara ha gburugburu ma nwee ọmarịcha echiche.
N'otu aka ahụ, Na Doi Inthanon National Park anyị nwekwara ike ịchọta obodo abụọ bi n'ime ya: Karen na Hmong. Agbụrụ abụọ a bi n'ụlọ dị mfe ma raara onwe ha nye maka ọrụ ugbo na ọrụ aka. N'ezie, ndị Hmong na-ahazi ahịa ọdịnala kwa ụbọchị iji resị ndị ọbịa ngwá ahịa ha ndị mara mma.
Zọ kachasị mma iji gaa na Doi Inthanon National Park bụ site n'ịgba ndị ụlọ ọrụ ọ bụla na Chiang Mai njem. Ọnụahịa ahụ na-enwekarị baths 900 maka mmadụ ọ bụla n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị iche na-adabere n'ụlọnga. Typesdị njegharị ndị a gụnyere ileta ogige, ụgwọ nbanye, na nri. Agbanyeghị, enwere ike ileta ya n'onwe ya, yana ọnụ ụzọ mbata nke 300 baht maka ndị ala ọzọ gbakwunye 40 baht ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga mpaghara pagoda. Pricegwọ nri na njem dị iche.
Ọ bụ otu n'ime ebe nsọ pachyderm ndị ama ama na Thailand. A maara ya maka ịbụ ogige mara ụlọikwuu maka nlekọta enyí (ọ bụ ezie na ha na-anabatakwa nkịta na nwamba a napụtara site n'okporo ámá yana atụ) nke nwere nkasi obi niile ka ha wee nwee ike ịgbake.
Elephant Nature Park mụrụ maka ebumnuche a na 1990 wee nata ọtụtụ onyinye maka ọrụ ya. Ihe bụ ihe ọzọ, Ha eweputala abughi nani ulo umu anumanu na-eme nkpuru aka ma burukwa ebe e ji amata banyere nsogbu ndi ozo dika igbusi oke ohia. ma ọ bụ ichekwa ọdịbendị nke obodo, na-akwado ọrụ na oriri nke ngwaahịa mpaghara.
Maka ndị chọrọ ịmata Elephant Nature Park, ha kwesịrị ịma na ha nwere ike ime ya site na usoro dị iche iche, ọkachasị ndị ọbịa ma ọ bụ ndị ọrụ afọ ofufo, na nke ọ bụla n'ime ha nwere njirimara nke ya.
Enwere ndị bịara nleta ruo ọtụtụ awa, maka otu ụbọchị, ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ maka otu izu ma nke ọ bụla nwere ọnụahịa dị iche. Otu n'ime ihe omume enwere ike ile bu enyí ka ha na-asa ahụ, na-eri nri ha, na-agagharị na ndoputa, na-ezute ndị obodo ma ọ bụ mụta banyere okike na ọrụ ubi, na ihe ndị ọzọ.
Ugwu Doi Suthep si Chiang Mai
Ogige Ntụrụndụ Doi Suthep-Pui nwere ugwu abụọ a na-akpọ Doi Suthep na Doi Pui. Nke mbu enwere ulo uku mara nma nke anakpo Wat Phrathat Doi Suthep, nke ana ahu na Chiang Mai.
Ekwuru na ọ wuru ya na 1393 n'oge alaeze nke Lanna na akụkọ mgbe ochie na-ekwu na ebe e wuru ya, ahọrọ enyí na-eburu Buddha.
Oge kachasị mma iji mata ebe a bụ na ọdịda anyanwụ, nke bụ mgbe ndị njem nleta pere mpe ma ị nwere ike ịnụ ụtọ njem ahụ nwayọ. Na mgbakwunye, ụlọ nsọ ahụ na-enwu zuru oke nke na-eme ka ọ maa mma karịa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Ntinye na-efu bat 30.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Tailandia » Chiang Mai, ugwu nke ugwu Thailand
Ebe obibi Warwick Castle nke War War nke Roses Abụọ